IDG Capital သည်ဟောင်ကောင် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ကော်ပိုရေးရှင်း နှင့် ဒေါ်လာ ၁. ၆ ဘီလီယံ ကာဗွန် ကင်းစ င်သည့် နည်းပညာ ရန်ပုံငွေ ကိုတည်ထောင် ခဲ့သည် - Pandaily
IDG Capital သည်ဟောင်ကောင် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ကော်ပိုရေးရှင်း နှင့် ဒေါ်လာ ၁. ၆ ဘီလီယံ ကာဗွန် ကင်းစ င်သည့် နည်းပညာ ရန်ပုံငွေ ကိုတည်ထောင် ခဲ့သည်
Jan 24, 2022, 14:10ညနေ 2022/01/24 23:32:47 Pandaily
ဟောင်ကောင် နှင့် China Gas Group နှင့် IDG Capitalယူနိုက်တက် သည်စုစုပေါင်း ယွမ် ၁၀ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၁. ၆ ဘီလီယံ) နှင့် ပထမဆုံး ရန်ပုံငွေ ယွမ် ၅ ဘီလီယံ ဖြင့် ကာဗွန် သုည နည်းပညာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ရန်ပုံငွေ တည်ထောင်ရန် တနင်္လာနေ့တွင် ကြေငြာခဲ့သည်။
ယွမ် ၅ ဘီလီယံ ၏ပထမ အဆင့်ကို နေရောင်ခြည် စွမ်းအင်၊ လေ စွမ်းအင်၊ စွမ်းအင် ဘက်ထရီ များ၊ စွမ်းအင် သို လှ ော င်မှု၊ စမတ် ဇယားကွက် ၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင် စွမ်းအင်၊ ကာဗွန် ကုန်သွယ် မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု စသည့် ကာဗွန် သုည နည်းပညာ နှင့်ဆက်စပ်သော ဆန်းသစ် တီ ထွ င်မှု နယ်ပယ်များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သွားမည်ဖြစ်သည်။
ကာဗွန် သုည ရန်ပုံငွေ သည် စွမ်းအင် ထိန်းသိမ်း ခြင်းနှင့် ထုတ်လွှတ်မှု လျှော့ချခြင်း ကိုမြှင့်တင်ရန် စွမ်းအင် ဆန်းသစ် သော နည်းပညာ များနှင့် ထုတ်ကုန်များ ကိုလျင်မြန်စွာ ကြားဖြတ် နိုင်ရန် ထူးချွန်သော ကုမ္ပဏီများ ကိုမြှင့်တင် လိမ့်မည်။
ဤ ရန်ပုံငွေ သည် ကာဗွန် သုည နည်းပညာ နယ်ပယ် ရှိ ဆန်းသစ် သော ကုမ္ပဏီ များအတွက် အရင်းအနှီး အထောက်အပံ့ များပေး ရုံသာမက Lianyan Smart Energy Co., Ltd. ၏ လက်အောက်ခံ Lianyan Smart Energy Co., Ltd. ၏ အသုံးချမှု အခြေအနေ ကိုလည်း ဖွင့် ပေးလိမ့်မည်။
၁၈ ၆၂ ခုနှစ်တွင်စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ကုမ္ပဏီသည် ဟောင်ကောင်ရှိ စွမ်းအင် ထောက်ပံ့ သူ အများ ဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ လက်အောက်ခံ Towngas Smart Energy Company Limited သည် မြို့ပြ ဓာတ်ငွေ့ နှင့် ပြန်လည် ပြည့်ဖြိုး မြဲ စွမ်းအင် ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
စွမ်းအင် လုပ်ငန်း တွင်ပါ ၀ င်သည့် အကျိုးတူ အရင်းအနှီး အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုအနေဖြင့် IDG Capital သည် SVOLT, Welion New Energy, Xiaopeng Automobile, NIO , EnerVenure, JD Energy, Niu Technologies စသည်တို့ကို ထောက်ပံ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Sequoia Capital China သည် အခြေခံအဆောက်အအုံ ရန်ပုံငွေ အသစ် ကိုတည်ထောင် ခဲ့သည်
ထို့အပြင် နှစ်ဖက် စလုံးက ဆန်းသစ် သော ကာဗွန် သုည နည်းပညာ များနှင့် ဖြေရှင်းနည်း များ ကိုပူးတွဲ လေ့လာရန် ကာဗွန် သုည နည်းပညာ နယ်ပယ်တွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် လိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။